Articles tagged 'bmx'
Gore shines at BMX meetings 3 October 2017 HARARE - Rising BMX rider Emmanuel Gore gave a promising performance at the African Continental Championships and Africa Challenge which was held in the country over the weekend. At the Africa Continental Championships held on Saturday at Old Georgians Sports Club, Gore, who was competing in t...
Young Gore shines in SA 20 April 2017 HARARE - Zimbabwe rising BMX rider Emmanuel Gore made his presence felt during the first round of the 2017 South African National Age Group Series (Nag) at Germiston BMX Club in Johannesburg, South Africa over the Easter holiday. The seven-year-old, Grade 3 student, who races for Team Fearless...
Gore dazzles at inter-provincials 25 October 2016 HARARE - Rising BMX rider Emmanuel Gore re-affirmed his growing status as one of the hottest emerging riders in the country after winning the 2016 Zimbabwe BMX Inter-Provincial Series held in Bulawayo over the weekend. The St John's Preparatory School, Grade Two pupil, buoyed by his recent exp...
Zim BMX riders impress 8 July 2015 HARARE - Zimbabwe's BMX riders held their own at the 2015 BMX National Age Group Championship Series in Alexandra Park, Pietermaritzburg, South Africa over the weekend. Reigning Junior Sportswoman of the Year Rebekah Oberholzer was the pick of the local riders after winning three gold medals o...
Oberholzer caps off impressive season 15 December 2014 HARARE - Junior Sportswoman of the Year nominee Rebekah Oberholzer capped off an inspirational year after being crowned Africa Challenge Champion last Sunday. The seven-year-old, who has made a 2014 Redline Mini her favourite toy, put in a shift at Harare’s BMX track to win all her races on th...
BMX riders set for Africa Challenge 6 December 2014 HARARE - Zimbabwe Cycling Federation says they are ready to host the seventh edition of the BMX Africa Challenge that starts today at the Harare BMX Club. The federation’s president, Andrew Donaldson, expressed hope that Zimbabwe will scoop this year’s title. Zimbabwe and South Africa are t...
Rebekah's season to remember 11 November 2014 HARARE - Missing out on the joys of childhood in the pursuit of a dream is never an easy thing to do, more so if you are only seven years old. But that has not stopped Rebekah Oberholzer from taking the BMX world by storm. At a time when most of her age mates seem to have admirable social l...
Zim BMX riders shine in SA 30 October 2014 HARARE - The Zimbabwe team that recently returned from the African continental Championships held in Giba Gorge Durban South Africa brought home a bronze medal and earned the country some UCI points. A team of 12 riders made the trip and these include Elite riders Scott Donaldson, Anthony Timo...
Top BMX rider assaulted 19 October 2014 HARARE - Zimbabwe’s top BMX rider Tawanda Marova (Elite men) will not be part of the team that is set to participate at the Continental Championships to be held in Pietermaritzburg South Africa later this month after he was brutally assaulted at BMX Club last Thursday. Marova together with Sim...
Zim BMX riders for SA 6 October 2014 HARARE - Zimbabwe Cyclists Federation (ZCF) has confirmed the members of the team to participate at the African Continental Championships to be held in Pietermaritzburg South Africa October 26. This year, four local; Tawanda Marova (Elite men), Simon Martin (Elite men), Antony Timothy (Elite m...
Zim Bmx team ready to take on the world 18 July 2014 HARARE - Zimbabwe Bmx president Paul Denslow has backed his riders to excel at the Bmx World Championships that begin next week in Rotterdam, Holland. At least 4000 riders will battle for honours in Holland’s second-largest city with 13 Zimbabwean riders announcing their presence across the ch...